गाईको पिसाबमा भेटियो सुन ! अब किसान मालामाल – Sadarline
बाँकेको एक सुधार केन्द्रमा रहेका युवकको मृत्यु
नेपालगञ्जलाई बालश्रम मुक्त बनाइने
नेपालगञ्जमा वित्तिय अनुशासनका बारेमा सेजनको अन्तरक्रिया
घरेलु हिंसाका दिनहुँ बढ्दै, पीडित हुनेमा महिला नै बढी
डुडुवामा विकास योजना निमार्ण तीव्र, पालिकाद्वारा अनुगमन
बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु घरदैलो सकेर व्यक्तिगत भेटघाटमा व्यस्त
जेष्ठ नागरिकका लागि नेपालगन्जमा दिवा सेवाकेन्द्र सन्चालन
गाईको पिसाबमा भेटियो सुन ! अब किसान मालामाल
२० असार २०७३, सोमबार १४:२१
सदरलाइनडटकम : गाईको गहुँत पवित्र मानिन्छ र हिन्दु धर्मका देव तथा पितृ कार्यहरुमा गौमूत्रको ठूलो महत्व छ । हुनत विज्ञानले समेत गहुँतको सेवनले मानिसका विभिन्न रोगहरु निको हुने भएकाले गहुँतलाई औषधि नै मानेको छ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएको गाईको गहुँत हुँदा हुँदा आर्थिक रुपमा पनि बहुमुल्य बनेको छ । किनकी गाईको पिसाबमा सुन भेटिएको छ ।
भारतको गुजराँतको जूनागढ कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर बि ए गोलकियाले गाइको पिसाबमा सुन भेटिएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो एक शोधबाट यो प्रमाणित गरेका छन् की गाईले दुधमात्र होइन सुन पनि दिने गर्छ ।
विश्वविद्यालयको बायोटेक्नोलोजी विभागका प्रमुख गोलकियो आफ्नो ४ वर्षे शोधका दौरान गिर नश्लका ३ सय भन्दा बढि गाईको पिसाबको निरन्तर परीक्षण गरे । गौमुत्रको परीक्षण पश्चात उने यो पत्ता लगाए की गाईको १ लिटर गहुँतमा ३ देखि १० मिलिग्रामसम्म सुन निकाल्न सकिन्छ । उनका अनुसार गहुँतमा लवणको रुपमा सुन पाइन्छ जुन पानीमा घुलनशील हुन्छ ।
टाइम्स अफ इण्डियामा छापिएको खबर अनुसार शोधकर्ताहरुले क्रोम्याटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमी विधिको प्रयोग गरी गौमुत्रको परीक्षण गरेका थिए ।
शोधकर्ताका अनुसार गाइको साथै उँट, भैँसी तथा भेँडाको पिसाब पनि परीक्षण गरिएको थियो । तर अन्यको पिसाबमा सुन भेटिएन, केबल गाइको पिसाबमा मात्र सुन भेटियो । साथै शोधकर्ताहरुले गौमूत्रमा ३ सय ८८ प्रकारका औषधीय तत्व समेत फेला पारेका छन् । यी औषधिय तत्वमा मानिसको सरीरमा लाग्ने विभिन्न खाले रोग निको पार्ने दाबी शोधकर्ताको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
सपना विष्ट/सदरलाइनडटकम २० असार, नेपालगन्ज : बाँकेमा विपद्बाट हुने क्षती जतिसक्यो कम गर्नका लागि हदैसम्मको पूर्वतयारी अपनाइएको सम्वद्ध सराकोरवालाहरुले दावी गरेका छन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिले नेपालगन्जमा सोमबार आयोजना गरेको मनसुन पूर्व तयारी कार्यशाला गोष्ठीमा बिपद्का क्षेत्रका काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई चुस्तदुरुस्त राखिएको दावी […]
२ पुष २०७६, बुधबार १७:३५
बुद्ध जन्मस्थलीमा सडक खाना महोत्सव गरिँदै
२७ भाद्र २०७५, बुधबार १७:१२
नायिका पुजाको दर्शकसँग ‘रामकहानी’
११ असार २०७७, बिहीबार १७:४७
२१ माघ २०७४, आईतवार ०९:०७
लोक सेवा सम्बन्धी केही बस्तुगत प्रश्नउत्तरहरु
१० आश्विन २०७३, सोमबार १३:१२
४ असार २०७५, सोमबार १८:२१